Ukuze uqhubeke nenkxaso yakho iyadingeka ngokukhawuleza. Ngokujoyina le ndawo uxhasa umsebenzi kaMartin Vrijland kunye nomnikelo. Ukuba ufuna kwakhona izigidi zabantu ukuba zikwazi ukufunda imbali eyahlukileyo yeendaba rhoqo ngonyaka, inkxaso yakho yamkelekile. Kuya kuwe ukuba uninzi kangakanani ufuna ukunikela. Ngokuba ilungu undinceda ndisinde naphezu kokuhlaselwa kumntu wam.
Ukunikela ngexesha elinye - € 50,00 - elingenamkhawulo
Ilungu lonyaka - € 25,00 - elingenamkhawulo
Umthengi wonyaka - € 65,00 - elingenamkhawulo
Ilungu lesilivere yesizwe - € 125,00 - elingenamkhawulo
Ilungu legolide - € 250,00 - elingenamkhawulo
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.454.056